Sam On Beach The |
Sam On Beach The
Shanta duntu iyo 243 paylines naadi, Sam on Beach waxay ku salaysan tahay troll aannu u jecel laga Electric Sam. Markan uu yahay isagoo qoyskiisa fasax ah in Caribbean. iyaga ku darmado ee dibad xiiso xeebta. Tani ciyaar xiiso diyaar u yahay inuu ciyaaro on the UK casinos fiican online.
About Developer ee Sam on Beach ah
Elk Studios ayaa ku wareegsan tan iyo 2012 oo wuxuu yimid sida sameeysa barnaamijyada software-casino fiican. ciyaarta sahay shirkadda ee ka shaqeeya dad badan oo ciyaaraha. Afyare Tan waxaa loo horumariyo iyaga by iyo la ciyaari karaa UK casinos fiican online.
Afyare Tani waxaa laga yaabaa in shantii duntu aasaasiga ah laakiin waxaa jira guud ahaan 243 Siyaabaha aad u dhigi karto bet iyo guuleysto. The soo jeeda aragga rafcaanka ee ciyaarta ayaa muujinaya goobta kaamil ah xeebta. Calaamooyinka on duntu ka yihiin oo dhan sida ay theme ee ciyaarta in ay ciyaartay karaa UK casinos fiican online. Calaamooyinka low-qiimaha waa u haysteen doontooda midab iyakana ah, kalluun, iyo seahorses. Calaamooyinka-qiimaha sare waa Sam ee troll iyo qoyskiisa oo ay ku jiraan naagtiisa Sandra, walaalkiis, Ted, iyo gabadhiisa Maggie.
The sifooyinka kala duwan ee this UK casinos fiican online Afyare yihiin:
dhigeeysa Free- kala firdhiso waa icon dawan iyo waxa ku kicin kara habkaani markii saddex ama in ka badan ee u kala firdhiyaa kuwaas oo dhul on reels.You heli doonaa 5, 10, ama 15 dhigeeysa lacag la'aan ah degtey 3, 4, ama 5 fidiyana.
Beach Xusuusaha Respin- Marka aad isku jira line siman ee dhamaan xubnaha qoyska ka dibna feature waxaa lagu bilaabi doono. Waxaad ka heli respin leh 4 wilds dhegdheg.
Electric Daaweysey- Habkaani nool yahay inta lagu jiro wareega Free dhigeeysa iyo afar xubnood oo qoyska ka ciyaaraan door in this. Hit 3 ama walxood Sam dheeraad ah ee dhigeeysa xor ah oo uu electrifies icon ah random taas oo ka dibna waxay noqotaa duurjoogta ah dhegdheg. Hit 3 ama walxood oo dheeraad ah Sandra iyo kor bay u siinayaa inay 10x multiplier 3 walxood Maggie oo waxay wanaajisaa fursada aad ku guuleystay by samaynta oo dhan walxood oo qiimo hoose baaba'aan ka duntu ku. Hit 3 walxood Ted iyo wuxuu ku siinayaa multiplier a dhegdheg.
Waxaa Waa xiiso leh, kulan xiiso leh kula badan oo muuqaalada si aad xiiso u ciyaarta. The UK casinos fiican online ciyaarta kuu ogolaanaya in aad kor ku guuleysan in ay 2,275 jeer aad sharad.